Madaxweynaha Soomaaliya oo daahfuray mashruuca Fiber... | POHSOMEV.COM
Madaxweynaha Soomaaliya oo daahfuray mashruuca Fiber...
posted by admin on Sat, 01/13/2018 - 10:10
Bosaso[Puntland Post]-Madaxwaynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxwaynaha Puntland Mudane C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray mashruuca Fiber Optic-ga ee xambaara internetka xawaaraha sare leh ee ay hirgalisay shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Somalia.
Munaasabadda lagu daahfurayay mashruucan ayaa ka dhacday xarunta mashruuca Fiber Optic-ga shirkadda golis ee ku taal xeebta Boosaaso dhineceeda waxana ka qayb galay wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dawladda federaalka iyo Puntland iyo masuuiyiinta sare ee shirkadda isagaarsiinta Golis.
Gudoomiye ku xigeenka board-ka shirkadda Golis Luqmaan Xaaji Maxamuud ayaa madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxweynaha Puntland uga sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray mashruucan waxa uuna xusay in shirkadda Golis ay u dhabagashay mashruucan si ay uga haqab tirto bulshada Soomaaliyeed baahida ay u qabaan adeegga Internetka oo tayaysan.
Madaxweynaha dawladda Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in daahfurka mashruuca Fiber Optic ee ay hirgalisay shirkadda Golis ay tahay talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka technologiyadda, waxa uuna uga mahadceliyay shirkadda Golis dadaalka ay ugu jirto horumarinta bulshada.Cabdiqani BoosPuntland Post-Bosaso
The post Madaxweynaha Soomaaliya oo daahfuray mashruuca Fiber Optic-ga shirkadda Golis appeared first on Puntland Post.
RW Khayre oo Deyniile ku kormeerey Ciidamo lo...
Ciidamada NISA Oo howlgallo ka sameeyay dulee...
Kumanaan wali ka qaxaya bariga Quuta
Madaxweyne Farmaajo Oo ku wajahan dalka Qatar
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo bilowday...
Somali PM visits troops readied for anti-al S...
Guddoomiye Jawaari Oo laga dalbaday in uu Is...
NISA carries out massive security operation o...
Adeegga Zaad Service Shirkadda Telecom .
Dooni ay saaraanaayeen dad muhaajiriin ah oo....
Warbixin: Muranka Jawaari iyo Xukumadda Kheyr...
Traditional elder killed in Mogadishu
Ministry for Security says more police were d...
Xil. Khadiijo Diiriye oo sii ololisay xiisada...
Akhriso bayaan: Hay’ada Culimada oo war rasmi...
Maxaa kala socotaa 7 Shakhsi oo uu midkood no...
Safar uu Madaxweyne Farmaajo Berri ku aadi la...
Muhaajiriin ay ku jiraan Soomaali Oo lagu xir...
Shir looga hadlayay ka hortagga abaaraha soo...
The mayor of Mogadishu opened the self-relian...
Jawaari Heeskaan ayaa Maanta u Shidan
Aqalka Sare ee oo guddi u magacabay xalinta.....